SomaliTalk.com » Sideen u Fahamnaa Quraanka? Q:24aad
Sideen u Fahamnaa Quraanka? Q:24aad
Suurada 86aad Adh-dhaariq:
Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 17 Aayadood, waxeyna soo Dagatay Suurada Al-Balad, Muxafkana waxey kaga Beegan tahay Biloowga Qeybata |Labaad ee Juzka 30aad.
Macnaha Guud ee Suurada Adh-Dhaariq:
Suuradan waxey ka Hadashaa Amuuraha Caqiidada Quseeya, gaar ahaan waxey Xujooyin Cad cad ka Tilmaantaa Awooda uu Allaah (Cw) uu u leeyahay Soo Bixinta Maalinta Qiyaamaha, maxaa yelay Allaha Insaanka Abuuray asagoon jirin waxaa u Sahlan soo Celintiisa Geerida ka dib.
Suurada 87aad Al-Aclaa:
Suuradan waxaa kaloo loo yaqaan Sabaxa, waana Suurad Makiyah ah, Cadadka Aayadaheeduna waa 19 Aayadood, waxa ayna soo Dagatay Suurada At-Takwiir ka dib, Musxafkana waxay uga Beegan tahay Biloowga Qeybta Labaad ee Juzka 30aad.
Suuradan waxey si Guud uga Hadashaa Arimaha kala ah:
1- Allaah Tilmaamo iyo Magacyo uu Gaar u leeyahay.
2- Quraanka iyo waxyiga Lagusoo Dajiyay Nabi Muxamad.
3- Waano aaad u wanaagsan ee wax u tareysa Quluubta Nool, oo ay ka Faa’iidi karaan Ahlu Iimaanka.
Suurada 88aad Al-Ghaashiyah:
Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 26 Aayadood, waxa ayna soo dagatay Suurada Ad-Daariyaat ka dib, Musxafkana waxay kaga Beegan tahay Biloowga Qeybta Labaad ee Juzka 30aad.
Macnaha Guud ee Suurada Al-Ghaashiyah:
Suuradan waxay Guud haan ka hadashaa Sadax Arimood oo Aaas aas ah.
1- Maalinta Qiyaamaha iyo Dhibaatooyinka ay kala kulmi Doonan Gaalada sidoo kalana waxey soo Gudbisaa Suuradan Nicmooyinka ay Mu’miniinta ku heli Doonaan Maalintaas.
2- Xujooyin iyo Daliilo Tusiya Allaah (Cw) Waaxid ahaanshihiisa, iyo Awooda weyn ee Alaah leeyahay ee ka Dhex Muuqata Abuurka Geela, Cirka Quraxda Badan, Dhulka Balaaran ee Fidsan.
3- Suurada waxey Dadka Xasuusisaa in ay u Laaban Doonaan Allaah (Cw) so loola Xisaabtamo looguna Abaal Mariyo Qof walba waxuu Kasbaday Shar iyo Kheyr.
Suurada 89aad Al-Fajri:
Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheeduna waa 30 Aayadood, waxayna soo dagatay Suurada Al-Leyl, Musxafkana waxay kaga Beegan tahay Biloowga Qeybta labaad ee Juzka 30aad.
Macnaha Guud ee Suurada Al-Fajri:
Suuradan waxey si kooban uga Hadshaa sadax Qodob oo Muhiimna ah:
1- waxey Sheegtaa qaar ka mid ah Umadihii Horeeyay ee Beeniyay Rusushii Alaah (Cw) sida Reer Caad, Thamuud, Qoomkii Fircoon, waxeyna Cadeysaa Suuradan Cadaabkii ku dhacay Gaalnimadooda darteed.
2- Suuradan waxey Tilmaantaa in Aduunyada inta la joogo Imtixaano Shar ama kheyr, Faqri ama Maal, Insaankana Maalka Jaceylka uu u qabo awgiis ayuu yiraahdaa Rabigey wuu i Karaameeyay, Hadii faqri taabtana waxuu yiraahdaa Rabigey wuu i ihaaneeyay, asagoo Maleeya in Karaamada iyo Ihaanad Dhabta ah Maalka ama Faqriga yahay, taasna waa wax qaldan.
3- Waxey kaloo Suurada ka Hadashaa Aakhiro iyo Dhibaatooyinka ka jira iyo Noocyada Dadka u Qeybsami Doonaan Maalinkaas, Qolo Liibaani Doonta iyo Qolo Nasiib Xumo la kulmi Doono, is;la markaana Suuradan waxey Tilmaantaa tusaalooyin lagu kala Tilmaamayo Nafta wanaagsan iyo Tan Xun.
Suurada 90aad Al-Balad:
Suuradan Makiyah, Cadadka Aayadaheedu waa 20 aayadood, waxeyna soo dagatay Suurada Qaaf ka dib, Musxafka waxey kaga Beegan tahay Bartamaha Qeybta Dambe ee jezka 30aad.
Macnaha Guud ee Suurada Al-Balad:
Suuradn Guud ahaan waxey ka Hadashaa Qiyaamaha iyo Dhibaatooyinka ka jira,
Waxeyna Suuradan tilmaantaa maalinta Aakhiro waxyaabaha waaweyn ee Dhici doona sida in Dadka Qubuuraha kasoo Bixi doonaan, iyo in ay la mid Noqon doonaan Maalinkaas Baalaleyda duusha ee midba meel Xooran oo kale, taasoo Macnaheedu yahay in ay wareeri doonaan Dhibaatada jirta Darteed oo ay noqonayaan Nidaam la’aan sida Xasharaadka oo kale oo midba Meel Xooran yahay.
Suurada 91aad Ash-Shamsi:
Suuradan waa Makiyah, Cadadka Aayadaheedu waa 15 Aayadood, waxeyna soo Dagatay Suurada Al-Qadri ka dib, Musxafkana waxey kaga Beegan tahay Bartamaha Qeybta Dambe ee Juzka 30aad.
Macnaha Guud ee Suurada Ash-Shamsi:
Suuradan waxey si Guud uga Hadashaa laba Arimood oo Muhiim ah :
1- Moowduuc ku saabsan Nafta Insaanka iyo waxa ay Xambarsan tahay ee Sharta ama Kheyrka ah, ee Hanuun ah ama Baadil ah.
2- Moowduuc ku Saabsan Xadgubka iyo Abaal marka ka Dhasha, waxaana Tusaale u ah jazaha xadgudubka Cadaabkii ku Dhacay Reer Thamuud.
Suurada 92aad Al-Leyl:
Suurada waa Makiyah, Cadadka Aayadaheedu waa 21 Aayadood, waxeyna soo dagatay Suurada Al-Aclaa ka dib, Musxafkana waxey kaga Beegan tahay Dhamaadka Qeybta dambe ee Juzka 30aad.
Macnaha Guud ee Suurada Al-Leyl:
Suuradan waxey ka Hadashaa Camalka Insaanka iyo Kifaaxa iyo Daalka uu Aduunka ku dhex Muteyasanayo, ka dibna Jazaha iyo Abaal marka uu la kulmi doono ee Nicmo ama Cadaab ah.
Waxaa gacan lka geestay Hey’ada Soeeg Info@soeeg.com